Cod stew, ipasika ekhethekileyo | Ukupheka kweKhitshi
UHana mitchell | | Cuisine yaseSpain, Ukupheka kweentlanzi, Iiresiphi zokupheka
Kuyatshiwo, kuyaphawulwa ... ukunikezela kumakhubalo enyama ngexesha Iveki yePasika... sisono. Ngaba umhlaba uphela ngaphandle kwesiteki esihle? Suku! Dumisani iNkosi ngokusivumela ukuba singene kwindalo engachazwanga ye Ubudlakudla ndide ndiyifumane iresiphi yebhayibhile: i ikhowudi yesityu (okanye ukuvuka).
Uthobekile lo zampablogger uguqe ngamadolo phambi kwakho ukukhuthaza ukuba wonwabe #slockcoocking. Kungangaphezulu kakhulu ukuba ungabandakanya ibhawodi yePasika kuluhlu lwakho lweSpotify ngelixa ulungiselela oku kutya ... kodwa kulapho ndiyilahla khona. Thatha ithuba "lekhefu" lamacephe okugqibela onyaka ... ukufanele oko, kwaye uyazi.
Intombi Enyulu ... esinjani isidlo esimnandi sokutya (okanye ukuvuka ... kuxhomekeke kwinqanaba lokuzinikela kwakho). I-Ista inikezela ngamatye anqabileyo njengokutya okumnandi kunye nokugqibeleleyo. Kukhona ixesha lokuqala layo yonke into, ke ndiyakucacisela inyathelo ngenyathelo ukuze, nokuba awazi ukuba uqhotsa iqanda, uya kukwazi ukukhalisa umakhulu wakho ngalo mmangaliso.
Ixesha lokulungiselela: 12 h
Ixesha elipheleleyo: 12 h 30 imiz
Yiphile intombi le
Iigrama ezingama-300 zamantshontsho omileyo ngaphandle kokuntywila
Iigrama ezingama-300 zekhowudi edibeneyo
Iigram ezingama-300 zesipinatshi esitsha
2 itswele eliphakathi
1 intloko yegalikhi
1 ithisipuni yepaprika emnandi
1 itispuni yomhlaba ikumin
Amagqabi ama-2 bay
UKUFAKWA KWAYO KUYAZI NGCONO!
Simanzisa ii-chickpeas kubusuku obudlulileyo. Uya kuqaphela ukuba bafumana i-chubbier kwaye ngokucacileyo bathamba.
Siyikhupha i-chickpeas kwaye siyifake embizeni kunye nelitha yamanzi (aká 4 iiglasi).
Chuba itswele ususe ulusu lwangaphandle entlokweni yegalikhi
Ngothando kunye nenkampani, sibeka i-anyanisi ENYE, intloko yegalikhi kunye neqabunga le-bay ebhodweni kwaye bavumele "badansa emanzini" ngaphezu kobushushu obuphakathi.
Ngelixa ii-chickpeas zipheka, siya kwipani yokufryisha kuba ixesha le-«sofrito» lifikile. Sinqunqa itswele ebesiligcinile lilungile, siyaxobula ii-clove ezimbalwa esinazo kwaye senza okufanayo (sizisika kakuhle kakhulu).
Sitshisa iipuniwe ezi-4 zeoyile yomnquma epanini enkulu yokutshiza kwaye siyinambise ngegqabi le-bay (aká, sibeka igqabi ngeoyile kwaye siyivumele ishushu). Nje ukuba kushushu, sidibanisa itswele.
Xa itswele libotshelelwe (licacile) yongeza igalikhi.
Okwangoku, siyaxobula iitumato kwaye sizinqunqe njengoko senzile ngetswele kunye negalikhi.
Xa igalikhi kunye netswele bumdaka ngegolide, yongeza iitumato ezinqunqiweyo ngepunipoon yepaprika emnandi kwaye uyiyeke imizuzu eli-10.
Yongeza isipinatshi epanini kwaye usose imizuzu embalwa. Sisusa kubushushu kwaye sigcine.
Sibuyela ekugxileni embizeni
Siyayingcamla i-chickpea embizeni ... kwaye ukuba ithambile ... lixesha elifanelekileyo lokususa itswele kunye nentloko yegalikhi kwaye ucofe ii-chickpeas (ukonga amanzi).
Yongeza kwi-chickpeas isosi ebesiyigcinile ngaphambili, zonke zityeni enye apho sipheke khona ii-chickpeas.
Siyashukumisa kwaye songeza kancinci ngenxalenye encinci yamanzi ukusuka ekuphekeni kwamantshontsho.
Sibeka umlilo kumandla aphakathi kwaye songeza ikumin kunye nekhowudi efakiweyo.
Kuba ikhowudi ipheka ngokukhawuleza okukhulu, siyishiya imbiza emlilweni kangangemizuzu emi-5 ukuya kwengama-10 (uyihambisa ngokujikeleza kweziphatho ngeentshukumo ezijikelezayo amaxesha ngamaxesha) kwaye ucime ubushushu.
Sivavanye indawo yetyuwa ... kwaye ... INTOMBI ... YINTONI IVEKI ENGCWELE?
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yaseSpain » Cod stew, ipasika ekhethekileyo
Kungenzeka ukuba yenzelwe kwiindawo ezininzi kodwa endlwini yam ihlala isenziwa ngeli xesha, eCatalonia. Siyigqibezela ngamaqanda abilisiweyo asikwe kwikota.
Iilenti ezenziwe ngabantu